पसल बेचियो, अब कहाँ जाने हो ? - Arthapage
पसल बेचियो, अब कहाँ जाने हो ?
प्रकाशित मितिः २३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:४० September 8, 2020
नेपालगन्ज २२ असार : लकडाउनका कारण साढे पाँच महिनासम्म नास्ता पसल बन्द रह्यो । कमाउन नेपालगन्ज आएका रामबहादुर बिष्टले यो अवधिमा दुई छोराछोरी सहित चार जनाको परिवारको जेनतेन पेट पाल्न सके ।
कमाईको बचत थियो र त चल्यो । तर अव थान्न नसकिने अवस्था भएपछि उनले गत बुधवार पसल छाड्ने निर्णय गरे । हुन त उनको पसल बेच्ने योजना थियो । थोरै पैसामा भए पनि कसैले किन्छ की भनेर ग्राहक खोज्दै डिहे ।
तर उनले जता पनि बेच्ने भेट्थे, किन्ने कोही भेटेनन् । अन्तत : भएको सामान कोठामा राखेर घर फर्किने निधो गरेका छन् । त्यसैले उनले अहिले सामान राख्ने कोठा खोज्दै छन् । बिष्ट भन्छन्,––‘गाउँबाट पैसो कमाउन शहर पसियो । लकडाउनले पसल बन्द गरायो । अब कहाँ जाने, के गर्ने हो ?’
लकडाउनका कारण पसल नचल्दा अनिश्चित भविष्य बोकेर हिड्नेमा विष्ट जस्ता धेरै छन् । कसैले समस्या प्रकट गर्छन् त कसैले मनमै गुम्साएका छन् । तर सबैको पीडा उस्तै छन् । लकडाउनका कारण शिक्षा, पर्यटन, यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित छ । संयौको संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । मानिसहरु के खाने, के लगाउने भन्नेमा चिन्तित छन् । लम्बिदै गएको लकडाउनले धेरैलाई घर न घाटको बनाएको छ ।
कोरोनाका कारण बाँकेका तीस अर्व बढि लगानी रहेको बाँकेको होटल क्षेत्र धरासायी बनेको छ राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकिय क्षेत्र बाँके जिल्ला भित्रमा करिव ३ देखि ४ अरब बार्षिक रुपमा राजस्व तिर्ने बाँके जिल्ला भरिका ४००० होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यसायहरु बन्द भएका कारण २० देखी २५ हजार भन्दा बढि कर्मचारी बेरोजगार भएको र ति सबैको परिवारको चुलो निम्ने खतरा बडिरहेको छ साथै होटल व्यवसायसंग सम्बन्धित अन्य व्यवसायी र त्यसमा रहेका जनशक्तिहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
प्रकाशित मितिः २३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:४० |
Prevअब ब्यालेन्स रिचार्ज, ट्रान्सफर र इन्क्वाइरीसहितका आधारभूत सेवामा एउटै युएसएसडी नम्बर प्रयोग हुने
Nextब्याज र घरभाडा मिनाहा गर्न माग